Ithebhulethi ene-KDE yama-euro angama-200 | Kusuka kuLinux
Ithebhulethi ene-KDE yama-euro angama-200
Lesi bekungeke kube yisikhathi sokuqala ngikhulume ngekhompyutha (noma efanayo) enayo KDE kufakwe kuqala. Kanye kubhulogi lami lakudala I-KDE4Life ukukhuluma mayelana Xompu, ikhompyutha evela eJalimane eletha KDE ifakwe ngokuzenzakalelayo.
Manje sekuyisikhathi sethebhulethi ebizwa Spark.
Ngiyakuqinisekisa uyilungu elisebenzayo lephrojekthi I-Plasma esebenzayo, futhi kubhulogi yakhe uyasitshela mayelana nale tablet.
Izingxenyekazi zekhompuyutha zayo zinesizotha ngandlela thile, iprosesa ye-1GHz AMLogic ARM, iMali-400 GPU, i-512MB ye-RAM, i-4GB yesitoreji sangaphakathi kanye nesikhala sekhadi le-SD, isistimu ye-multitouch efinyelela ku-7 ″, ngaphezu kokusobala ukuthi ine-Wifi.
Ungama-euro angama-200 noma ama-265 $ (i-USD).
Kodwa ... Uyini umehluko kwamanye amaphilisi?
Emakethe kuthandwa kakhulu iPad (Ngigcina umbono wami "entweni" enjalo), amaphilisi amaningi ane Android, kepha lena inayo I-Plasma esebenzayo (KDE) 😀
Ngamanye amagama, ngeke sisaba nakho kuphela KDE kudeskithophu yethu, i-laptop, manje singayisebenzisa nakumathebulethi 😉
Yebo, Android ngokwazi kwami ​​ayemukeli iminikelo yekhodi, kepha ngentuthuko yomphakathi ye- KDE yebo kungenzeka ukufaka isandla kukho.
Eminye imininingwane ye KDE kumadivayisi eselula, kungaba ukuthi ukusetshenziswa ngokusobala kuzoba phansi kakhulu kunalokho esikujwayele, kungasetshenziswa Qt / QML (Ngikhulume ngalokhu ku-athikili: Ngabe leli kungaba ikusasa labadlali bevidiyo be-KDE?), ukwesekwa "kwefu", njll
Angazi ngawe, kodwa izindaba ziyamangalisa kimi. Ukuziba inkinga yethebhulethi nokukwazi ukuyithenga noma cha, iqiniso lokuthi KDE Ukuba kusengaphambili kulolu hlobo lwedivayisi ngokungangabazeki kuyinto ebalulekile 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ithebhulethi ene-KDE yama-euro angama-200
Hhayi-ke, angicabangi ukuthi i-KDE ihamba kahle ngaleyo hardware, futhi angazi, angiyiboni eyamathebulethi (impela, akunjalo), ngizokwakha indawo yamaphilisi esikhundleni sokubeka I-KDE
Yi-KDE kepha hhayi njengoba aziwa kumakhompyutha 😉
Kwenzelwe leyo hardware, kwasuswa i-A LOT (kepha okuningi) kwafakwa ezinye izinhlelo zokusebenza, njll
Yebo, ngokusobala lezi izindaba ezinhle, ngicabanga ukuthi uma ukusebenza kukuhle, abantu bazothanda imvelo ye-KDE.
@Isibindi ukhohlwa iphrojekthi eqhutshwa ngabantu be-KDE ukuyithuthukisa ngokuqhubekayo isikhathi eside nokuthi ilungiselelwe futhi yakhelwe le nhloso.
@Isibindi ukhohlwa iphrojekthi eqhutshwa ngabantu be-KDE http://plasma-active.org/ ukuyithuthukisa ngokuqhubekayo isikhathi eside nokuthi ilungiselelwe futhi yakhelwe le nhloso.
Kepha yiPlasma, futhi lokho okudla ku-KDE angicabangi ukuthi kuyiPlasma nje
IPlasma Active yenzelwe leyo njongo, njengoba kusho uXgeriuz.
Sebenzisa i-QtQuick / QML, lokho sekuvele kungokonga okuphawulekayo. I-Plasma yenzelwe amadivayisi aphathekayo njenge-tablet. Okudla kakhulu ku-KDE ideskithophu ye-semantic, okungukuthi, iNepomuk / Strigi ne-Akonadi, esebenzisa i-RAM eningi, kepha ingavalwa futhi angazi noma izotholakala yini ePlasma Active noma cha….
Kungenzeka futhi ukuthi inguqulo yamathebulethi iza nemiphumela eminingi ekhutshaziwe, noma ngabe izosebenzisa i-OpenGLES futhi umshayeli obhekene nokuphatha ikhadi lemifanekiso uzoba olifunayo ... angazi, angazi Angicabangi ukuthi bazofaka i-KDE kumkhiqizo wabo futhi bahlale bebanzi kakhulu, uhlobo oluthile lokutadisha noma bacabanga ukuthi bazobe sebekwenzile, ngithi, noma ngabe kungukuxhumana nePlasma Active xD Team
Kubuhlungu ukuthi lapho ngihlala khona lawa mathebhulethi awafiki.
Kimi izindaba ezinhle. Ikakhulu ngibheka izinketho (zamanje nezesikhathi esizayo) ezitholakalayo, ngishada nale.
Yebo, iPlasma Active ibukeka iyathakazelisa. Imisebenzi ehlukile ye-«Izimo» zezimo ezahlukahlukene, ezinjengalezo zomsebenzi, omunye umuntu, omunye owasekhaya, omunye amaholide (angamadeski abonakalayo, kodwa noma kunjalo). Wenze kahle kakhulu 🙂 Ubunye kufanele buqaphele…
Impela yizindaba ezinhle kakhulu, uma bengingakwazi futhi ngikhulise i-hardware eza ngokuzenzakalela, bengizoyithenga ngokushesha i-XD
Okuthile okusengqondweni yami okwamanje, ingabe i-KDE izoba nesitolo sayo esikhathini esizayo? Kungaba yinto emangalisayo 😀
Yebo ku-omgubuntu ngibone izindaba ezifanayo, kepha ngibonile ukuthi kukhona nevidiyo http://youtu.be/UPkYyDiuGyc «Lesi isingeniso ngokusetshenziswa kokukhishwa kokuqala kwePlasma Active. lapha kukhonjiswa kusebenza kudivayisi ye-WeTab. » futhi kubukeka kukuhle kakhulu
Ungawakha kanjani amaphasiwedi aqinile nge-pwgen
Izimfihlo zeGoogle neFacebook